Ungaphila njani ngendlela esempilweni kunye nokuhlala ngokunyanzelwa ukuba uhlale umyili wemizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngokuqinisekileyo sesinye seengcali ezichitha iiyure ezininzi ngosuku zihleli phambi kwekhompyuter. Kwaye uninzi lomsebenzi wethu uphuhliswa ngokukodwa, kwi studio yethu kwaye kude nezihlwele ezikhulu, into engaqhelekanga. Ukuze sikwazi ukwenza konke okusemandleni kufuneka sizifumane sisebenza kwindawo epholileyo nenomtsalane, apho kulula ukuba sigxile kwaye ngaphezulu kwako konke kusinika intuthuzelo.
Apho simi khona imihla ngemihla kubalulekile, kwaye ukungahoyi kungakhokelela kwiingxaki zempilo. Ucoceko lwasemva kwento yinto ekufuneka kuthi sonke, ngenxa yomsebenzi wethu, sinyanzelwe ukuba sihlale kwindawo enye ixesha elide, kufuneka siyithathele ingqalelo. Uninzi lwezinto ezingasebenzi kakuhle kunye notshintsho lubangelwa kukwamkelwa kwezikhundla ezingalunganga kunye nokunyanzela imizimba yethu ukuba ihlale ngendlela engeyiyo eyendalo. Ukongeza, kubalulekile ukuba siyazi ukuba ezi zinto zitenxileyo azibangelwa kukuma komzimba kuphela, kodwa izinto ezibalulekile ngokweemvakalelo zibalulekile. Uxinzelelo, unxunguphalo okanye uvalo luyabonakala emzimbeni wethu kwaye kudala uxinzelelo oluhlala ixesha elide olungaphilanga. Kungenxa yoko le nto namhlanje siza kunikezela eli nqaku ukukunika iingcebiso malunga nendlela yokulungisa ezi ngxaki kwaye uzisombulule ngendlela esempilweni kunye neyona ndlela iphumeleleyo.
1 Kunqande ukuhlala phantsi kwaye unikezele ubuncinci iyure enye ngosuku ukujikeleza okanye ukuziqhelanisa nolunye uhlobo lomdlalo
2 Hlala unethemba kwaye uzame ukulawula uxinzelelo
3 Khetha ngononophelo ifanitshala yeofisi yakho okanye isifundo
4 Khathalela ukutya kwakho
5 Kukho ubomi obungaphaya komsebenzi!
Kunqande ukuhlala phantsi kwaye unikezele ubuncinci iyure enye ngosuku ukujikeleza okanye ukuziqhelanisa nolunye uhlobo lomdlalo
UHippocrates wathi yonke into onayo kunye noyisebenzisayo iphela ikhula, ngelixa yonke into onayo kwaye ongayisebenzisanga iphela ikukudlala. Singathetha ngokuhlala nje kuphela ngokungabikho kwemisebenzi yomzimba rhoqo kunye nokuqhubeka okwenzekayo xa sichitha ngaphantsi kwemizuzu engama-30 ngosuku siziqeqesha kwaye singaphantsi kweentsuku ezintathu ngeveki. Xa oku kusenzeka kwaye kuhlala ixesha lihamba, iziphumo zitshabalalisa kakhulu, gcinani engqondweni ukuba abantu ngokwendalo bafuna ukwenza imithambo kwaye bahambe ukuze bahlale kwezona meko zilungileyo. Iingxaki ezibangelwa kukuhlala phantsi kokuhlala zibangelwa zizinto ezinzulu ngakumbi kunendlela umntu acinga ngayo kwaye ngokuqinisekileyo babuyela kwimeko yengqondo nengqondo.
Hlala unethemba kwaye uzame ukulawula uxinzelelo
Amaxesha amaninzi oku kunokuba yinto elungileyo, ngakumbi xa sifuna ukwenza iiprojekthi ezininzi ngaxeshanye. Kwezi meko, zama ukufumana ezinye iindlela ezinje ngokuhlehlisa imihla yokuhanjiswa kwaye ukuba oku akunakwenzeka, khumbula ukuba imithambo-luvo ayisombululi nto, kunoko yenza iingxaki kwaye uthintele isingqisho sakho somsebenzi.
Khetha ngononophelo ifanitshala yeofisi yakho okanye isifundo
Usihlalo ohlala kuwo rhoqo ubaluleke kakhulu, gcinani engqondweni ukuba uya kuchitha i-95% yeeyure zakho zokusebenza kuyo. Zininzi Izitulo zeofisi ezinezisombululo ze-ergonomic kwaye zilungelelanisa ngokugqibeleleyo neemfuno zethu kunye nezikhundla. Kubalulekile ukuba sibenayo enokulawulwa kwaye iguqulwe kangangoko kunokwenzeka. Zama ukufumana isitulo esikuvumela ukuba uguqule ukutyekela ngasemva (ukuba kunokwenzeka kufuneka sijonge enye ene-backrest yemodyuli ehambelana nokugoba komqolo), ukuphakama kunye neendawo zokubeka iingalo. Nayi eminye imizekelo yezitulo ezitofotofo nezinomtsalane ezilungele abayili bemizobo kunye nezinye iingcali ezifana nathi ezichitha ixesha elide zihleli eofisini:
Khathalela ukutya kwakho
Ukuba umsebenzi uyakunyanzela ukuba uchithe ixesha lakho elininzi phambi kwekhompyuter, zama ukungakuhoyi ubuncinci ukutya kwakho. Qinisekisa ukuba ukutya kwakho kutyebile kuzo zonke iintlobo zezondlo kwaye ukunqande ukutya okukhawulezayo kangangoko.
Kukho ubomi obungaphaya komsebenzi!
Ngokukodwa oosomashishini kunye nabazimeleyo baxakeke ziimfuno zeshishini labo kwaye bazama ukuba nemveliso kakhulu ngokuthatha iiyure zomsebenzi ezigqithileyo. Inyani yile yokuba kubonisiwe ukuba sinikezela ngexesha lethu lokuzonwabisa kunye nokuphumla, oku akuyi kuba nefuthe elibi kwimpilo yethu kuphela kodwa kuya kuchaphazela nezinga lethu lemveliso. Oku kunokuba yinto engenzi lutho kwaye ukuba umsebenzi uthatha iipesenti ezingama-90 zexesha lakho unengxaki. Sukuncama amaxesha akho okuphumla kwaye uthathe inxaxheba kubo ukwenza into othanda ukuyiphumza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Ungaphila njani ngendlela esempilweni kunye nokuhlala ngokunyanzelwa ukuba uhlale umyili wemizobo
Iicookies ezihonjisiweyo ziyalelwe ngu-Aaron Paul kwi-premiere ye-Triple Nine